ITHUBA LECOPPER (ISIKHOKELO SOKUTHENGA) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Ithuba leCopper (Isikhokelo sokuthenga)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokuthenga ityhubhu yobhedu apho sigubungela ezona ntlobo zidumileyo zeetubhu zobhedu, imibuzo eqhelekileyo kunye nezinto eziluncedo kunye nezibi.
Iibhafu zeCopper zilongezo olukhulu kwigumbi lokuhlambela. Banokuphumla kwaye bonwabe. Inkangeleko icokisiwe kwaye ayinasiphelo. Apha ngezantsi kukho ukhetho olunokuthi lwenziwe ukuze ufumane ityhubhu yobhedu efanelekileyo yoyilo lwakho lokuhlambela.
Yintoni ibhafu yobhedu
I-Copper Tub Pros kunye neNgxaki
Uyikhetha njani ityhubhu yobhedu
Iindidi zeeTubhu zeCopper
Ityhubhu yokuMisa iCopper
Ityhubhu yeCopper Clawfoot
Ityhubhu yobhedu enesando
ICopper yaseJapan yokuThambisa iTub
Ukuthambisa ityhubhu yobhedu
Ukulahlwa kweCopper kwiTub
I-Faux Copper Tub
Imibuzo yeTubhu kunye neempendulo
Ngaba iibhate zebhafu zisempilweni?
Ngaba iibhubhu zobhedu zibulala iintsholongwane?
Ungayisebenzisa ityiwa yokuhlamba kwibhafu yobhedu?
Ngaba izitya zobhedu zikhululekile?
Uyicoca njani ityhubhu yobhedu
Ngokulula, ibhafu yobhedu ibhafu eyenziwe ngobhedu. Ubhedu luhlala luqinile, isinyithi. ICopper nayo igobe ngokulula njengokumila ngaphandle kokuqhekeka okanye ukwaphuka. ICopper yinto enobungozi kwindalo esingqongileyo kwaye inezinto ezinganyangekiyo kurusi, intsholongwane, kunye neempawu zokungunda.
Njengoko kukhankanyiwe apha ngasentla ubhedu luhlala luqinile kwaye lubumbeka. Ukubonakala kweetyhubhu zethusi kuhle kwaye izinto zinika ukubonakala okungapheliyo. ICopper iyamelana nokubumba kwaye iyintsholongwane. Ukongeza, ezi ntlobo zemibhobho zigcina ubushushu, zigcina isitya esishushu ixesha elide. Ubomi bobhedu bude kakhulu kwaye ekugqibeleni izinto zinokuphinda zenziwe kwakhona.
Ngelishwa, ngenxa yazo zonke ezi zinto zilungileyo, iibhafu zobhedu zibiza kakhulu kwaye zihlala zifumaneka izindlu zangasese zokunethezeka . Ubhedu, ngelixa ubungqina bokurusa kunye nokubola, busengachaphazeleka kwiiasidi kunye nezinye izinto ezirhabaxa. ICopper ifuna ulondolozo oluthile ukugcina zonke iimpawu zayo ezintle.
Kukho izinto ezimbalwa ekufuneka zijongiwe xa kufikwa ekukhetheni ityhubhu yobhedu echanekileyo, kwaye xa uchitha le mali ininzi baya kufuna ukuthathelwa ingqalelo.
Umgangatho - Olunye lweempawu ezintle ekufuneka ujonge kuzo yimigangatho. Kukulungele ukukhangela i-welded seams, njengoko ibamba ngcono. AmaSolders seams abuthathaka kwaye anokuqhekeka ixesha elide.
Ukulinganisa -Igeji kukutyeba kwesinyithi. Ngokwesiqhelo ungacinga ukuba okuphezulu kungcono, kodwa kule meko ufuna isilinganisi esezantsi, kuba oko kuyakuthetha into etyebileyo. I-14 ukuya kwi-16 gauge bubungakanani obuqhelekileyo xa kufikwa kwiibhafu zobhedu, kodwa nayiphi na igeji esezantsi yamkelekile. Naliphi na igeji ephezulu inokubakho kumonakalo ongaphezulu.
Iindleko - Iindleko zebhafu zixhomekeke kakhulu kwigeji nakumgangatho ekuxoxwe ngawo ngasentla. Ngokusekwe kuhlahlo-lwabiwo mali olumiselweyo unokugqiba ngezi zigqibo zingasentla. Ngokwesiqhelo iibhafu zokuhlambela zinokubiza naphi na ukusuka kwi- $ 3,000 ukuya kwi- $ 35,000. Ayisixhomekeki kuphela kumgangatho kunye negeji, kodwa kubungakanani, imilo, uphawu, amanqaku ongezelelweyo, okanye ukugqitywa.
Ukukhetha uhlobo lwesitya sobhedu lukhetho olukhulu. Kukho iimilo, ubungakanani, kunye nokugqitywa okunokukunceda ekuchongeni uhlobo oluchanekileyo lwebhafu ekufuneka ulithengile.
Kukho iintlobo ezininzi zeebhafu ezizimeleyo, ezinye zazo zibandakanya- iphela kabini, isiliphu esiphindwe kabini, ukuntywila eJapan kunye nezinye ezininzi.
Ibhafu yokuhamba ngokukhululekileyo ephindwe kabini ijikelezwe macala omabini ukuvumela umsebenzisi ukuba ahlale ngapha nangapha kwebhafu. Oku kunokuvumela abantu ababini ukuba bahlale emibhafini ngaxeshanye ukuba zikhulu ngokwaneleyo. Iidreyini zihlala embindini ukulungiselela olu khetho.
Ibhafu yesilayidi esizimeleyo esizimeleyo ibizwa ngegama lokuvela, elungiselelwe ukufana nesliphu. Isitya sokutyibilika esiphindwe kabini siyafana nebhafu yokuphela ephindwe kabini ekhankanywe apha ngasentla, kodwa isiphelo ngasinye siyaphakanyiswa kwaye sihlaziye intuthuzelo eyongeziweyo. Njengokuba kuphelile kabini umjelo usembindini kwaye ubukhulu bawo banele abantu ababini. Olu hlobo lukhulu kakhulu ekusebenziseni i-ergonomically, kunye nokukhululeka ekuphumleni ixesha elide.
Ubhedu ityhubhu yeenyawo yibhafu ezizimeleyo enika ubuhle bemveli ngokwedlulele. Imilenze ityhubhu yobhedu iphakanyisiwe kwaye ineenyawo ezinjengeenzipho ezibonisa igama.
Ishubhu sobhedu esenziwe ngesando sibhekisa kukugqitywa kwebhafu. Ihammer sisiphelo esirhabaxa esenziwa kusetyenziswa isando ukwenza indent ubungakanani obunqwenelekayo kumphezulu. Ukuba ibhafu ayenziwanga ngesando, ihlala inomphetho ogqibeleleyo.
Ubhedu AmaJapan afunxa iibhafu zihlala zimile njengoxande okanye ii-ovals, kwaye zikhulu kakhulu. Azihlali zikhulu ngeenxa zonke, zincinci kwaye zinzulu, ukunika unyawo olukhulu. Oku kunika amandla okuba phantse wonke umzimba ungene emanzini. Rhoqo kukho isihlalo esibekwe ebhafini ukuvumela umsebenzisi ukuba ahlale phezulu kwaye amanzi abe ngaphezulu kwamagxa.
Endaweni yoyilo olujikeleziweyo ityhubhu yobhedu yaseJapan inemilo yoxande.
Isikhumbuzo seminyaka esi-7 kuye
Ityhubhu yokuntywila ngobhedu ayiqhelekanga ukuba ibe nkulu macala onke, zincinci kwaye zinzulu, ukunika umthamo wamanzi ngakumbi kodwa zingathathi ndawo ininzi kwigumbi. Oku kunika umsebenzisi ukuba ahlale phezulu kwaye amanzi abe ngaphezulu kwamagxa, oku kungenisa phantse umzimba uphela. Ukwenza oku iibhafu ezifunxa zihlala ziqukethe isihlalo, esongeza intuthuzelo nakumsebenzisi.
Ukuhla kwebhedu kwi-tub kufakwe kwisakhelo esibizwa ngokuba yi-'oundround '. Oku kufakwe ithayile okanye inxenye yeyunithi enkulu. Ingqonge ivumela indawo yokubeka iisepha, amakhandlela, izityalo okanye ezinye izinto onqwenela ukuzibekela ibhafu yokugqibela. Ukulahla kwiibhafu kuhlala kufakwe kwindawo evulekileyo kodwa kunokufakwa kwi igumbi lokuhlambela .
Uyilo lobhedu lobhedu lufumene ukuthandwa okubonelela ngenkangeleko efanayo xa ityhubhu yobhedu yokwenene kwiqhezu lexabiso. Iibhafu zobhedu ze Faux zisebenzisa i-acrylic liner enombala ogqityiweyo wokujonga.
Nazi ezinye zeyona mibuzo iqhelekileyo ebuzwe ngaphambi nasemva kokuthenga ityhubhu yobhedu.
Iityhubhu zobhedu zikhuselekile ukuba zenziwe ngobhedu olumsulwa. Nantoni na ngaphandle kobhedu olunyulu inokungakhuselekanga njengoko inokuba ne-mercury okanye lead. Jonga ukwakheka ukuze uqiniseke. Logama ityhubhu ilubhedu olunyulu ngokwenene lukhetho olusempilweni kakhulu! Iimpawu ze-antibacterial zilungile ekucoceni ilog.
Iibhafu zeCopper zibulala iintsholongwane. Oku kunika umphezulu ococekileyo kwaye kwenza ukuba kube nokugcinwa ngokulula, oko kufuna kuphela ukuhlanjwa okukhawulezileyo kunye nokubambeka komile ukugcina ibhafu icocekile. Oku kukwenzela ukucoca amanzi okuhlamba.
Iityuwa zebhafu azikhuthazwa kwiibhafu zobhedu. Ityuwa iphendula gwenxa ngezixhobo zobhedu eziya kubhabhu. Oku kunokubangela ityhubhu yobhedu eluhlaza, uhlobo lwezinto ezenziwe ngentsimbi ezingafunyaniswanga eziphendula ngokubila.
Ezinye iibhubhu zobhedu zikhululekile ngakumbi kunezinye. Iityhubhu zokutyibilika zezona zinobuchule be-ergonomic kwaye zikulungele ukusetyenziswa ixesha elide. Kunokongezwa iijets zentuthuzelo eyongeziweyo.
U-Patina yindlela yokwenza imichiza eyenzeka kwizinyithi ezinganyangekiyo. Oku kunokwenzeka kwiibhafu zobhedu ukuba ziyekwe zinganyangwa. I-patina inokutshintsha umbala webhubhu yentsimbi-ngamanye amaxesha olu lutshintsho olunqwenelekayo. Ukuba kunjalo, xa umbala unxibe kwimeko oyifunayo unokuxutywa okanye upolishwe ukuze ugcine kuloo meko. Ukugqitywa kobumnyama 'patina kuhlala kungabonakali kancinci xa kuthelekiswa nemibala eqaqambileyo yobhedu. Ukuhluba le patina, ukusebenzisa ukhrimu wokucoca kuya kunceda, kodwa kubalulekile ukupholisha kube kanye okanye kabini ngonyaka, njengoko uninzi lunokonakalisa umphezulu.
Ngelixa iibhafu zobhedu zibulala intsholongwane kwaye zinqabile kurusa kunye nokubola, kusafuneka zicociwe. Ngethamsanqa iyabagcina bekwinqanaba lolondolozo olusezantsi. Ezinye iingcebiso zidweliswe apha ngezantsi ukugcina ityhubhu yobhedu ikwimeko efanelekileyo.
Emva kwako konke ukusetyenziswa kwebhafu, ukucoca ngokukhawuleza kunye netawuli eyomileyo kwanele. Sebenzisa nantoni na erhabaxa okanye nayiphi na imveliso eyomeleleyo okanye ene-asidi yokucoca ayicetyiswa. Iityuwa zebhafu nazo ziyingozi kwityhubhu yobhedu. Uku-Wax kunye nokucoca ityhubhu kunokuthintela ukukrwela, ukumbiwa kwezimbiwa kunye nokuhlanjwa kwebala okanye ukutshintsha kombala.
Ukufumana umxholo onxulumene noko jonga inqaku lethu ku indlela yokukhetha ibhafu .
Ukwandiswa kweAmerican Standard 2422V002.020 ... $ 589.84 umthengisi ogqibelele (63) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-FerdY Boracay 67 'i-Acrylic Freestanding… $ 1009.99 umthengisi ogqibelele (143) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iimveliso zeNkulumbuso zeCopper VBT20DB Bath T ... $ 343.00 umthengisi ogqibelele (16) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-SparkPod Shower Head - Uxinzelelo oluphezulu lwemvula… $ 29.97$ 39.99 umthengisi ogqibelele (18611) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
ubuhle kunye nerhamncwa ilokhwe yomtshato ephefumlelweyo
lwendlovu vs ilokhwe emhlophe yomtshato
2 piece mama kamalokazana unxiba
indlela yokufumanisa ukuba idayimane iyinyani
Indlela yokubhala isifungo somtshato
Izipho zomtshato wesibini kwisibini
ukutshintsha igama emva kokutshekishwa komtshato